Oppo achakurumidza kuve nekopi yayo yeApple Watch | Ndinobva mac
Oppo achakurumidza kuve nekopi yayo yeApple Watch
Isu hatigoni kutenda izvo zvatinoona dzimwe nguva uye izvo ndezvekuti iyo yekuChina foni inogadzira Oppo aigona kuve nayo wachi yakangwara kunyanya yakafanana neApple Watch kubva kuCompertino kambani. Ehe, iwo mufananidzo watinawo pamusoro pemitsara unozvitaurira wega, iko iko iko iko kopi yekuve wakadaro.
Isu tinodaro nekuti parizvino ichi chingori chirevo chekuti ichave nguvai, asi chokwadika, inouya yakananga kubva kuna Oppo saka tinofungidzira kuti ichave neiyi dhizaini. Chivimbiso chepamutemo chakashaikwa kutaura kuti ichi chichava dhizaini yaro nechiratidzo asi haisi nguva yekutanga kuti tione zvakadai seizvi mumusika.
Iyi tweet kubva kuUniversIce inopfupisa zvese izvi zvatakakurukura, iyo kopi yeApple Tarisa na OPPO iri kutoenderera:
OPPO yekutanga smartwatch kupa, inotaridzika sei? pic.twitter.com/jNsqMV3X50
- Ice universe (@UniverseIce) January 30, 2020
Kunyangwe iyo chifananidzo chinogona kuonwa pachiratidziro chembambo iyo inoteedzera chaiko iyo iyo Apple Watch ine ... Izvi zvinogona kungova runyerekupe rwusina chinhu, asi isu hatitende kuti ndizvo. Mabhatani maviri ari padivi anoratidzwa mune ino kupa ndiwo musiyano mukuru watinowana mune wachi iyo yatinogona kutaura kuti iApple Watch kubva kune imwe mhando. Zvinosuruvarisa kuti zviwanikwa (zvese zvehupfumi neR & D) zvine makambani aya hazvina kushandiswa kugadzira zvishandiso zvitsva uye kwete mazwi emazwi ezvakatove nazvo pamusika. Zviripachena kuti OS haizove watchOS, ingadai ichishayikwa zvimwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Oppo achakurumidza kuve nekopi yayo yeApple Watch
6 ye10 akanyanya kutariswa akateedzana mukota yekupedzisira ari paApple TV +
Apple inovhara kwechinguva Apple Store muChina nekuda kwecoronavirus